Amandla okwelapha black cherry, siyabubona ngempela ukwazi kancane kakhulu, futhi eqinisweni akuyona nje esiphundu, kodwa futhi berry ewusizo kakhulu!
engaphezu kwezinkulungwane ezine zama-lezi amajikijolo, bayehluka ku isilinganiso ushukela izinto eziphilayo ahoxisiwe eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili. I cherry kuba mnyama, abe usizo nakakhulu, nakuba amamaki ukukhanya kancane engabangela komzimba. amajikijolo Dark aqukethe esiningi bioflavonoids, okuyizinto Antioxidants enamandla kakhulu. Iqinisa inhliziyo, imithambo yegazi, zishukumisa igazi, ukuvikela umdlavuza futhi rejuvenate umzimba. Izinhlobonhlobo ne asidi ewusizo okungaphezu nje amnandi. Ngempela, ukunambitheka omuncu cherry ukunikeza acid organic ezifana ascorbic (Vitamin C) futhi i-folic (Vitamin B9). I cherry imnandi, i-okunama-kilojoule amaningi, ngaphandle cherry sweet kubangela semali igesi emathunjini (ukubuyisa). Ngakho-ke, amnandi izinhlobonhlobo cherry sweet kuyadingeka ukuba ngakususi abantu abanesifo sikashukela. La majikijolo iqukethe yensimbi, okuyinto kuba nomphumela omuhle kwi ukwakheka kwamangqamuzana egazi kanye nokuzikhulula ekucindezelweni ubuhlungu bamalunga.
Ukuze ujabulele berry ewusizo hhayi kuphela ekuqaleni ehlobo, kodwa unyaka wonke, ungenza ezihlukahlukene izitsha ezivela cherry amnandi. Lokhu isagcine ahlukahlukene, sezimoto, juleps (isiphuzo enjalo ezithambile), omiswe noma okokuqandisa elula cherry efrijini.
Jam cherry Kunconywa izinhlobo white ngamatshe amancane izithelo ezinkulu. Cherry kudingeka uxubha kahle ngaphansi kwamanzi agobhozayo, asuse amathambo, ngaphandle kokulimaza uginindela. Berry ubeke epanini bese ugcwalisa noshukela, ukumelana ingxenye yehora. Ngemva kwalokho, uthele epanini inkomishi yamanzi upheke kuze ithenda, njalo kokukhipha Foam. Njengoba ukuqina sezimoto kumele kube ngezikhathi kuzame. Khona-ke engeza amagremu ezimbalwa citric acid, i-vanilla ushukela noma kalamula. Jam off ukushisa bese ulinda amahora eziyisikhombisa noma eziyisishiyagalombili. Phakathi nalesi sikhathi, le jam epholile futhi kahle ofakwe isiraphu.
Jam cherry ulamula namantongomane
Ukuze wenze lokhu ujamu ukuthatha eyodwa kilogram izinhlobo white cherry ngikugeze kahle, asuse amathambo. Esikhundleni amathambo igodi ukubeka ingxenye yesine ka ziyadliwa. Beka ama cherry i isitsha koqweqwe lwawo futhi uthele isiraphu. Lungiselela isiraphu kusuka eyodwa kilogram ushukela, eyodwa inkomishi yamanzi, walnuts eziyishumi futhi lukalamula. Ngo ngesitjeni sinye ukusika izinsalela lemon namantongomane. Ubilise imizuzu emihlanu, kathathu, ngezikhawu kwamahora amahlanu.
Cherry jam vanilla
Kulesi ujamu ku eyodwa kilogram cherry ukungezwa eyodwa kilogram ushukela nengxenye ingilazi yamanzi. Vanillin sengezwe ekupheleni. Ungakwazi ukwengeza tincetu lemon.
Cherry ujamu kanye cherry
Geza amajikijolo, udinga ukuthatha ngezabelo alinganayo. Hlukanisa amajikijolo ngokulinganayo: ingxenye eyodwa ngokushesha wafaka ebhange, kanti eyesibili povynimayte amathambo. Cherry, pitted Bilisa epanini, engeza nendebe uju. Lapho mass iphekwe, kuphole futhi uthele izimbiza. Abilayo jamu Roll up.
Jam cherry ne imigodi
Geza cherry futhi idiphu imizuzu emibili ngamanzi abilayo. Ngemva kwalokho, uthele amajikijolo noshukela isiraphu upheke ngemithamo ezintathu nge esingaba amahora amahlanu. Ekupheleni ukupheka wengeze ezine amagremu citric acid hhayi ujamu ushukela.
Futhi esiphundu, eziwusizo futhi uyobheka ezinhle jam cherry ne strawberry zasendle kanye currants abomvu. Sidinga ukuthatha leli ku isigamu ikhilo amajikijolo, isigamu amakhilogramu ushukela nendebe amanzi. I isiraphu ushukela ngesikhathi abilayo cherry aphansi (pre ekususeni bone) strawberry nahlanza kanye currants. Ukuvusa njalo, upheke kuze kuphekwe. Sebenzisa cherry hhayi kuphela njengoba amajikijolo ehlobo, kodwa umpheki aphume ke okumnandi.
Futhi zokungcebeleka Dzhubga: Izibuyekezo
Izicathulo Blue - izicathulo umbala yokwelapha